Articles – The Voice Journal
ဆင်းရဲနွံမှ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ရုန်းကန်နေရဆဲ မြန်မာနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုစစ်တမ်း
အရပ်သားအစိုးရအသွင်ပြောင်းပြီး ၂၀၁၂ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းမှစ၍ မြန်မာနိုင်ငံသည် နည်းပညာများကို ပိုမိုအသုံးပြုလာခဲ့ရာ ယခုအခါ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းနှင့် အင်တာနက်အသုံးပြုမှုသည် တစ်ဟုန်ထိုး တိုးတက်လာခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ယခု ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း (ဆင်းမ်ကတ်) သုံးစွဲမှုသည် မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေ ၅၄...
ယင်းဥပဒေကိုဖျက်သိမ်းပေးရန် တောင်းဆိုသံများဆူညံလာချိန်တွင် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးကအမိန့်ညွှန်ကြားချက်တစ်ရပ်ထုတ်ပြန်၍တရားစွဲဆိုမှု ဖောင်းပွမှုမရှိစေရန်ထိန်းချုပ်ခဲ့သေးသည်။လက်ရှိတွင်မှု ပြည်ထောင်စုအဆင့်လွှတ်တော်က ပြစ်ဒဏ်လျှော့ပေါ့ပေးနိုင်ရန်၊အလွယ်တကူတရားမစွဲနိုင်ရန်အတွက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်ရန်ကြိုးစားမှုစတင်နေပြီဖြစ်သည်။ သမ္မတဦးထင်ကျော်လက်ထက်တွင်နိုင်ငံသားများ၏လွတ်လပ်မှုနှင့်လုံခြုံမှုကိုကာကွယ်ပေးရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်၂၀၁၇ခုနှစ်မတ်လ၈ရက်တွင် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည့်နိုင်ငံသားများ၏ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာလွတ်လပ်မှုနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာလုံခြုံမှုကိုကာကွယ်ပေးရေးဥပဒေသို့မဟုတ်နိုင်လွတ်လုံဥပဒေပင်။ ယင်းဥပဒေကို ပြင်ဆင်မည့်ဥပဒေကြမ်းကို ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင်တင်သွင်းထားပြီဖြစ်ပြီး ပြင်ဆင်ရန်လုပ်ဆောင်ထားချက်မှာလက်ရှိဖြစ်ပွားနေသည့်တရားစွဲဆိုမှုများကိုမည်ကဲ့သို့ ပြောင်းလဲပေးနိုင်မည်နည်း။ ဥပဒေကို ပြင်ဆင်မှုစတင် ပြီးခဲ့သည့် ဖေဖော်ဝါရီလ၁၈ရက်နေ့ကျင်းပသည့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းဝေးတွင်နိုင်လွတ်လုံဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေကြမ်းကိုတင်သွင်းခဲ့သည်။သို့သော်လည်း...
Articles / lotaya / News Analysis / Politics
ထိုနေ့က ကျောင်းတက်ခေါင်းလောင်းသံအစား မြေကြီးများ တုန်ခါသည်အထိ ကျယ်လောင်သော ပေါက်ကွဲသံကြီးက ကလေးများကို ဆီးကြိုလေသည်။ စာအံသံများကြီးစိုးနေရမည့် ကျောင်းစင်္ကြံလမ်းတွင် သွေးကွက်များ၊ ကြောက်လန့်တကြားငိုသံများက ဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့သည်။ ဖုံအလိမ်းလိမ်း သွေးအလူးလူးနှင့် ကလေးများ ပြေးထွက်လာသော မြင်ကွင်း ကို ကျောင်းဆရာဦးသာအေးမောင်...
သမ္မတတွန်းမှ ရွေ့တော့မည် ဗစ်တိုးရီယားအမှု
ဗစ်တိုးရီးယားအမှုတွင် လက်သည်မပေါ်ဘဲ တရားစီရင်ရေး လမ်းဆုံးသွားမည့် ကိန်းရှိနေသဖြင့် ပြည်သူလူထုက စိုးရိမ်တကြီးစောင့်ကြည့်နေကြသည်။ ဗစ်တိုးရီးယားအမှုတွင် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူဟု ရဲတပ်ဖွဲ့က စွပ်စွဲထားသည့် ကိုအောင်ကြီးကို ဒက္ခိဏခရိုင် တရားရုံးက တရားရှင်လွတ်ပေးလိုက်သည်။ ရဲတပ်ဖွဲ့က ရာဇဝတ်ပြင်ဆင်မှုတက်ခဲ့သော်လည်း မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဥပဒေချုပ်ရုံးက ပြင်ဆင်ချက်တက်မှုကို...
ဝင်ငွေကွာဟမှု အရင်းရှင်စနစ်ကား အကျပ်အတည်းဆိုက်နေချေပြီ။ မကြာသေးမီကာလလောက်အထိ ဤ ‘ကောက်ချက်’ မှာ လက်ဝဲအသိုင်းအဝိုင်းကြားတွင်သာ ကန့်သတ်တည်ရှိခဲ့သည်။ သို့တိုင် ယနေ့အခါတွင်မူ ရှေ့တန်းရောက်စီးပွားရေးများ၏ နိုင်ငံရေးသက်တန့်ရောင်စဉ်တစ်ခုလုံး အကျုံးဝင်သည့် ‘ထင်မြင်ယူဆချက်’ ကြီး ဖြစ်လာချေပြီ။ ဘောဂဗေဒပညာရှင်များ၊ ပေါ်လစီမိတ်ကာများနှင့် သာမန်လူထုတို့မှာ...
Articles / Education / lotaya
ဂျပန်နိုင်ငံရောက်တုန်း အလုပ်အားလပ်ချိန်တွေမှာ ဂျပန်ခရီးသွားဆောင်းပါးတွေ ဆက်တိုက်ရေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အရင်ရေးနေတဲ့ ပညာရေးဆောင်းပါးတွေ မရေးဖြစ်တာကြာပါပြီ။ ဒီတစ်ခေါက်တော့ ပညာသင်ဆုဆောင်းပါးဆီ လှည့်လိုက်ပါဦးမယ်။ အရင်ကလည်း ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ဂျပန်ပညာသင်ဆု ဆောင်းပါးအချို့ရေးသားဖြစ်ခဲ့ပြီး ဒီတစ်ခေါက်တော့ ကိုယ်တိုင် ဂျပန်နိုင်ငံရောက်နေတာမို့ ဂျပန်တက္ကသိုလ်အချို့နဲ့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းတဲ့အခါ အပြည့်အဝပညာသင်ဆုနဲ့...
ကမ္ဘာကျော်စာရေးဆရာ Yuval Noah Harari ၏ အရောင်းရဆုံးစာအုပ်စာရင်းဝင် 21 Lessons for the 21st Century စာအုပ်ကို ဘာသာပြန်ဆိုဖော်ပြပါသည်။ လောကီသက်သက်ဝါဒ (Secularism) (အပိုင်း – ၃) ကိုယ့်အရိပ်ကကွယ်နေတာ...
ယခုတစ်ခေါက် အနောက်သို့ခရီးသွား။ အိန္ဒိယသို့ခရီးသွားသည့်အခါ မှတ်မှတ်ရရကိစ္စနှစ်ခုနှင့် ရင်ဆိုင်ရသည်။ တစ်ခုကတော့ အသားလတ်သော အာရှသားတိုင်းရင်ဆိုင်ရသော ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ဒုက္ခ။ တရုတ်နိုင်ငံ ဝူဟန်မြို့မှ စတင်သည်ဟု လူသိများသည့်အတွက် ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ဟု ကျော်ကြားပြီး တစ်ကမ္ဘာလုံး ခြောက်ခြားနေကြသည်။ အိန္ဒိယမြို့တော် နယူးဒေလီမှ...
သနပ်ခါး မြန်မာပိုင်ဆိုင်ရေး လမ်းစ
‘ရွှေဘိုသနပ်ခါးတုံးများ ရန်ကုန်လိမ်းဖို့ယူ၊ ဘယ်လိုအသားမည်းမည်း ဝါဝါညက်ညက်ဖြူ’ ဆိုသည့် သနပ်ခါးအကြောင်းကို ရေးဖွဲ့သီကုံးထားသော နန်းတော်ရှေ့ဆရာတင်၏ ဂန္တဝင်သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို သိမှီသူများရှိမည်။ သီချင်းကို မသိသည့်တိုင် ထိုသီချင်းထဲက သနပ်ခါးဆိုသည့်အရာကိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံတွင်း နေထိုင်သူတိုင်း သိကြမည်ပင်။ ငယ်စဉ်ကတည်းက ရေချိုးမျက်နှာသစ်ပြီးချိန်တိုင်း ပါးပြင်ပေါ်မှတစ်ဆင့်...
Articles / lotaya / Special Reports
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပါတီစုံအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကြီး မကြာမီကျင်းပတော့မည်ဖြစ်သည်။ ထိုရွေးကောက်ပွဲကို လွတ်လပ်မှု၊ တရားမျှတမှု၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊ အများယုံကြည်လက်ခံမှု၊ ပြည်သူ့ဆန္ဒနှင့် ရွေးကောက်ပွဲရလဒ် တစ်ထပ်တည်းဖြစ်စေရမည်ဟုဆိုကာ စံငါးချက်ချမှတ် လုပ်ဆောင်နေကြောင်း ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်းက ပြောကြားသည်။ ရွေးကောက်ပွဲအကြိုကာလ ရောက်ရှိနေသော်လည်း လက်ရှိအခြေအနေနှင့် ကိုက်ညီသည့်...